हाम्रो रंगशालामा चाँही फिल्म र म्युजिक भिडियोको सुटिङ-किरण चेम्जोङको खुला पत्र - Sidha News
हाम्रो रंगशालामा चाँही फिल्म र म्युजिक भिडियोको सुटिङ-किरण चेम्जोङको खुला पत्र
सम्पूर्ण देशले फुटबललाई सुचारु गरिसकेको भए पनि हाम्रो देशमा खेलकुदको विषयमा बोलिदिने कोही पनि मान्छे भएनन् । खेलाडीका लागि मात्र होइन खेलकुद लागि पनि बोलिदिने मान्छे भएनन् ।
सबै देशमा फुटबल सुचारु भइसक्दा हाम्रो देशमा भने खेलको लागि दुःखत समयमा बनाइएको रंगशाला फिल्मको सुटिङ तथा म्युजिक भिडियो सुटिङको लागि खुल्ला भएको छ । फुटबल खेल्न चाँही किन नहुने ? फुटबलले देशका लागि त्यति ठूलो असर पार्छ र !
म अबका दिनमा सम्पुर्ण खेलमैदान खेलका लागि सुचारु गरिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु । आखिर कहिलेसम्म नेपाली फुटबलको लोकदोहोरी फेसबुकमा हेरेर बस्ने ? हामीले नेपाली फुटबलको विकासका लागि कसैले केही गरिरहेको देखेका छैनौं ।
फुटबल खेलाडीले खेल्न बिर्सिसके । सरकार ! फुटबल राजनीति जस्तो होइन । बोलेर फुटबल खेल्ने गरिदैन । यो चिल्लो गाडीमा बसेर गफ लगाए जस्तो सजिलो हुँदैन । खेलाडीले २ खुट्टा चलाएर घर परिवार हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
७ महिना देखि बेरोजगार भएका खेलाडीको क्षतिपूर्ति कसले दिन्छ ? जुन खेलाडीले खेलेर नै जीविका चलाइरहेको थियो उ त आजभोलि खेलमैदान छोडेर विदेश पो जाँदै छ । यो त लाजमर्दो कुरा होइन र !
नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका गोलकिपर किरण चेमजोङ